जवानी र स्फूर्तिका लागि रामबाण हो मिश्री, अनगिन्ती छन् यसका फाइदा – Himalaya TV
Home » समाचार » जवानी र स्फूर्तिका लागि रामबाण हो मिश्री, अनगिन्ती छन् यसका फाइदा
जवानी र स्फूर्तिका लागि रामबाण हो मिश्री, अनगिन्ती छन् यसका फाइदा
७ फाल्गुन २०७४, सोमबार १७:५२
प्रायजसो घरहरूमा मिश्रीलार्इ प्रसादको रूपमा प्रयोग गरिने गरेको पाइन्छ । शुद्धताको कारणले पनि हिन्दू धर्ममा देवी देवतालार्इ प्रसाद चढाउन मिश्रीको प्रयोग हुन्छ । गुलियोका लागि मात्र होइन, मिश्री स्वास्थ्यको लागि पनि उत्तिकै फाइदादायक छ । गुणकारी मिश्री खानुको अनेकौं फाइदा छन् ।
-मिश्रीलार्इ भिंडीको जरासँग मिलाएर खानाले यौन शक्ति बढाउँछ । अायुर्वेदको अनुसार दिनहुँ दुधसँग मिश्री मिसाएर सेवन गर्नाले यौन सम्बन्धमा रूची नहुने, यौन दुर्बलता, विर्यको कमी अादि यौनसम्बद्ध समस्याहरू हल भएर जान्छ ।
-घाँटी खस्खसाउने वा खोकी लागेको बेला मिश्रीको सेवनले राहत दिन्छ । गलासँग सम्बन्धित समस्याहरू हटाउन मिश्री निकै असरदार मानिन्छ । मिश्रीलार्इ पानीमा घोलेर पिउनाले अाराम दिन्छ ।
-मिश्रीलार्इ सर्वत बनाएर पिउन पनि प्रयोग गरिन्छ । गर्मीको समयमा र खासगरी गर्मी ठाउँहरूमा चिसो पेय बनाउनको लागि मिश्रीको उपयोग हुन्छ । एक गिलास पानीमा मिश्री घोलेर पिउनाले यसले ग्लुकोजको रूपमा शरीरलार्इ ऊर्जा प्रदान गर्दछ । यसरी मिश्री-पानी पिउनाले स्फूर्तिको महसूस हुनुको साथै गर्मीबाट पनि राहत मिल्छ ।
-यदि मुखभित्र छाला गएको छ भने मिश्री र सुकमेलको धुलो बनार्इ छालामा लगाउनुहोस् । तपाइँको समस्या हटेेर जानेछ ।
-गोडा वा पैताला पोल्ने वा झमझमाउने समस्या छ भने नौनी र मिश्री बराबरी मात्रामा मिलाएर लगाउनुहोस् । जलन तुरुन्त गायब हुन्छ।
-नाथ्री फुट्ने वा खरो हुँदा नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ भने मिश्रीलार्इ पानीमा मिलाएर सुँघ्नाले अाराम मिल्छ ।
यस्ता छन् लसुनमा मह मिलाएर खानुको ८ फाइदा
यस्ता छन् अण्डा खानुकाे ९ फाइदा
हाछ्युँ राेक्नुहुन्छ? यस्ताे गल्ती नगर्नुहाेस्, घातक हुनसक्छ
सुन्दर छाला चाहनुहुन्छ? पानीमा यी चिज मिलाएर पिउनुहाेस्
डण्डीफोरले हैरान हुनुहुन्छ? खानुहाेस् यी ४ कुरा
माेटाेपन घटाउने यस्ता छन् ६ खानेकुरा
यस्ता छन् जाडाेबाट बच्ने पाँच उत्तम तरिका
हाेसियार! भुलेर पनि नखानुहाेस् दुधसँग यी चिज
ताताे पानीले नुहानुहुन्छ ? नगर्नुहाेस् यस्ता गल्ती
जाडाे याममा तुलसी सेवन गर्दा यस्ता छन् फाइदा (सेवन विधिसहित)